ပါဝါ:18.5kw + 0.75kw သုံးအဆင့်
စွမ်းရည်:200~ 300kg / h
ငါးအစာလေးများ: နစ်မြုပ်ရန်သို့မဟုတ် float ရန်?
စီးပွားဖြစ်ငါးအစားအစာများကိုရေပေါ်ခွဲခြားနိုင်သည် (extruded) သို့မဟုတ်ရိုးရာနစ်မြုပ် (ဖိအား - လုံးထိုး) လေးများ. ရေပေါ်နှင့်နစ်မြုပ်နေသောနှစ် ဦး စလုံးကျေနပ်လောက်သောကြီးထွားမှုကိုရရှိနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တချို့ငါးမျိုးစိတ်မျောကြိုက်တတ်တဲ့, အခြားသူများနစ်မြုပ်. လုံးလေးလုံးနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးနှစ်ခုလုံးရှိသည်. သို့သော်, floating လုံးလေးများအသုံးပြုခြင်းသည်နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအားသာချက်များရှိသည်:
တင့်ကား၏အောက်ခြေတွင်ကျန်နေသောနစ်မြုပ်နေသောအတောင့်များသည်များသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဖြုန်းတီးခြင်းများဖြစ်လေ့ရှိသည်. သို့သော်, floating feed လုံးလေးများသည်၎င်း၏ပုံသဏ္shapeာန်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်, ပင်နာရီပေါင်းများစွာရေ၌ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်, uneaten feed ကိုနေဆဲနဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်.
floating အစာကျွေးရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက် (extruded) ဘာလို့လဲဆိုတော့လယ်သမားတွေကသူ့ငါးရဲ့အစာအာဟာရကိုတိုက်ရိုက်လေ့လာပြီးအစာကျွေးတဲ့နှုန်းကိုအညီညှိလို့ရတယ်. နို့တိုက်ကျွေးမှုနှုန်းသည်နိမ့်ကျသေးသည်လားမြင့်မားသည်၊ မရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ငါးကြီးထွားမှုနှင့်အစာစားသုံးမှုထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အရေးကြီးသည်. သို့သော်, နစ်မြှုပ်နေသောလုံးလေးများသည်တင့်ကား၏အောက်သို့ကျလိမ့်မည်, ငါးတောင်မှသူတို့ကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ.
Floating Fish Feed Machine ၏ကောင်းကျိုးများ
အဆိုပါပွတ်စွမ်းအားအားဖြင့်ပစ္စည်းများအပူ, ဒီရေပေါ်ငါးအစာကျွေးသောစက်သည်ဝက်အူစက်၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိမှိုအပေါက်များမှကုန်ကြမ်းများကိုညှစ်ထုတ်ပေးသည်. စက်ထဲမှထွက်လာသောအခါလုံးလေးများ၏ဖိအားနှင့်အပူချိန်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်, နှင့်အစိုဓာတ်ကိုအငွေ့ပြန်. ထိုအခါပစ္စည်းများမာနနှင့် porous ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူလုံးလေးများဖြစ်လာသည်. လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, အစိုဓာတ်ကနေနေကြပါတယ် 15 ရန် 20 ရာခိုင်နှုန်း.
စိုစွတ်သောအမျိုးအစား၏အလုပ်လုပ်နိယာမသည်ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်ဆင်တူသည်. သို့သော်ယခင်အနေဖြင့်အစိုဓာတ်ကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်ငါးသို့မဟုတ်အစာထည့်သည့်စက်ထဲသို့ရေသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ထည့်ရန်လိုအပ်သည် 20 ရာခိုင်နှုန်း, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော 30 လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းရာခိုင်နှုန်း. ၎င်းသည်အပူများ၏အပူချိန်ကိုရေနွေးငွေ့ဖြင့်တိုးစေသည်.
1.အစာတောင့်သည်ပိုးမွှားများဖြစ်သည်, ကောင်းစွာချက်ပြုတ်, ငါးများအတွက်အစာကြေလွယ်ရန်လွယ်ကူသည်.
2.ရေပေါ်ငါးအစာကြမ်းထုတ်စက်မှပြုပြင်ပြီးသည့်နောက်၎င်းပစ္စည်းများ၏ပရိုတင်းကို denaturalized ပြုလုပ်သည်. ဒါဟာအစာကျွေးခြင်းနှင့်အစာအာဟာရမြင့်တက်.
3.လုံးလေးများသည်အလင်းဖြစ်သည်, သူတို့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ float နိုင်အောင်. ၎င်းသည်အစာကျွေးခြင်းနှင့်ရေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်.
( kw) ဝက်အူမီတာ
( မီလီမီတာ) စွမ်းအင်ဖြတ်တောက်
DGP200 1.5-2.0 132 1.5 5195 3.0
မိုဘိုင်း / whatsapp / wechat：008613653820230
မူပိုင်ခွင့် © 2012-2020 ဗစ်တာ Pellet စက်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.